အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ China Oxygen Concentrator ထုတ်လုပ်သူများ
တစ် ဦး တည်းသောမိတ်ဖက်
ဝန်ဆောင်မှုများ & အာမခံ
Aspirator Averlast 20
Aspirator AVERLAST 25
AngelBiss သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အဆင့်မြင့် PSA နည်းပညာဖြင့်စီးဆင်းသောအကွာအဝေးအောက်စီဂျင်စုစည်းမှုကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်၏လျှောက်လွှာများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ AngelBiss သည်မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
တစ် ဦး ချင်း၊ မိသားစုနှင့်အသေးစားဆေးခန်းများ၏အောက်စီဂျင်လိုအပ်မှုအတွက် AngelBiss စီးဆင်းသောအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။
ကြီးမားသောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စက်ရုံများအတွက် AngelBiss သည်လျှောက်လွှာနယ်ပယ်အတွက်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သောအောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့သောစနစ်များကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအပြင် AngelBiss အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အိုဇုန်းလွှာထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၊ ဖန်ထည်လုပ်ငန်း၊ ငါးမွေးမြူရေး / ငါးမွေးမြူရေး၊ ရေဆိုးကုသမှု၊
အထက်ပါလျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးအတွက် AngelBiss သည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအောက်စီဂျင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်ကိုပေးနိုင်သည်။
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြင့် ၉၃% (AC, DC, ဘက်ထရီများ) ဖြင့်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် 5L အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု။
ANGELBISS, ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးဘက်ထရီကို 5LPM အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကိုလည်ပတ်စေခြင်း။ တောင်မှ 5L / min စီးဆင်းမှုမှာ 93% သန့်ရှင်းစင်ကြယ် O2 ထုတ်လုပ်ရန်။
ANGEL5SB စီးရီးသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်သော 5L အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြည့်စုံဆုံးအချက်ပြစနစ်၊ တိကျမှန်ကန်သောအမှားညွှန်ပြခြင်းနှင့်စျေးကွက်တွင်တည်ငြိမ်ဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CE နှင့် ISO13485 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
1.Durable လီသီယမ်ဘက်ထရီ DC 24V လည်ပတ်
မိနစ် ၁၂၀ အတွင်းလျင်မြန်စွာအားသွင်းပါ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးနိုင်အောင်မိနစ် ၁၂၀ (၂ နာရီ) \_ t
COPD အသုံးပြုသူများအတွက်အောက်ဆီဂျင်သန့်စင်မှု ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃% ၃.၅ လီတာ
နံပါတ်များအားဖြင့်အောက်စီဂျင်သန့်စင်ခြင်း (တိကျမှု 00.0%)
5.Timer & Touch အလုပ်လုပ်သောခလုတ်များ
၆။ အရွယ်အစားကြီးမားသည့် ၆ လက်မ LED အလင်းသည်အလုပ်လုပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုပြသပါ
စုစုပေါင်းလည်ပတ်ချိန် ၇။ စုဆောင်းခြင်း
အပူချိန်မြင့်သောအပူချိန် (45ºC)၊ အမြင့် (15000 ပေ) ပတ် ၀ န်းကျင်ဒေသများတွင်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အထူးအင်္ဂါရပ်များ AngelBiss နည်းပညာမှသာထောက်ပံ့သည်
၁။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဘက်ထရီသည် 5LPM @ 93% Oxygen Concentrator ဖြစ်သည်။
4. ကလေးသူငယ်သော့ခတ် setting
Angelbiss oxygenconcentrator Angeibiss အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအလိုက်ကွဲပြားသောဖြေရှင်းချက်များကိုပေးနိုင်သည်။
Angelbiss အောက်စီဂျင်မီးစက်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အိုဇုန်းလွှာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာကုသမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအရည်ကျိုခြင်း၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်ခွဲခြားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများအတွက် Angelbiss သည်စဉ်ဆက်မပြတ်လုံခြုံစိတ်ချရသောမြင့်မားသောအောက်ဆီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက info@angelbisscare.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများမှသင့်အားအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ANGELBISS, အောက်စီဂျင်ပြင်းအား၏အတက်အကျကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံး, ပထမတစ်ခုက 0,1% အတွင်းအတက်အကျနှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလား။
ANGEL5S စီးရီးသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်သော 5L အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြည့်စုံဆုံးအချက်ပြစနစ်၊ တိကျမှန်ကန်သောအမှားညွှန်ပြခြင်းနှင့်စျေးကွက်တွင်တည်ငြိမ်ဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CE နှင့် ISO13485 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
1.A Touch သည်ဘက်စုံသုံးယူနစ်ကိုလည်ပတ်စေသည်။
COPD အသုံးပြုသူများအတွက် ၉၃% ± ၃% အောက်စီဂျင်သန့်ရှင်းရေးထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ 2.5Liter
5. ၆ လက်မ LED မီးလုံးသည်အလုပ်လုပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုပြသပါ
စုစုပေါင်းလည်ပတ်ချိန် ၆။ စုဆောင်းခြင်း
၁။ ကမ္ဘာ့ NO ။ ၁ အောက်ဆီဂျင်ထွက်ရှိမှုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတက်အကျနှုန်းသည် ၀.၁% အတွင်းထိန်းချုပ်သည်။
4. Lock Lock settings
၅.၃ နှစ်အာမခံသို့မဟုတ် ၁၈၀၀၀ နာရီသက်တမ်း
၆. အပူချိန်မြင့်သောအပူချိန် (၄၅ ံစင်တီဂရိတ်)၊ အမြင့် (၁၅၀၀၀ ပေ) ပတ် ၀ န်းကျင်ဒေသများအတွက်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
AngelBiss သည်ဆေးခန်းများနှင့်ဆေးရုံငယ်များကို 10LPM မှ 100LPM အထိစွမ်းရည်ရှိသည့်ကြီးမားသောအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုရှိသည့်ဆေးရုံများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု ၁၀-၁၀၀ LPM အတွက်နှစ်ဆစီးသောအောက်စီဂျင်ထွက်ပေါက်များရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အောက်စီဂျင်အများအပြားနှင့်အောက်စီဂျင်ထွက်ပေါက်များကိုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောဖိအားအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကိုလက်ခံသည် (အများဆုံးအောက်ဆီဂျင်ထွက်ပေါက်ဖိအားသည် ၆ ဘားအထိရှိသည်) ။ မြင့်မားသောဖိအားအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်ပြင်းထန်သောလေဝင်လေထွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အလွန်လေးလံသောလူနာများအတွက်အောက်စီဂျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုရှိသော AngelBiss အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်ဆေးရုံများ၊ ဆေးရုံများနှင့်အိမ်တွင်အောက်စီဂျင်ကိုလိုအပ်သောလူနာများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောမြင့်မားသောသန့်စင်သောအောက်စီဂျင်ကိုပေးနိုင်သည်။
အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့သည့်ပိုက်လိုင်းများရှိသောဆေးရုံကြီးများအတွက် AngelBiss သည်အမြင့်ဆုံး 200 Nm³ / hr နှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဆေးရုံရှိအိပ်ယာ ၁၀၀၀ ၏အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ AngelBiss အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးသည့်စနစ်မှပေးပို့သောအောက်စီဂျင်သည်အောက်ဆီဂျင်သန့်စင်မှု ၉၃% နှင့် (93% ± 3%) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
AngelBiss Healthcare Inc 1150 S Milliken Ave Ste 1086 Ontario, CA 91761
AngelBiss Healthcare Inc R2၊ အမှတ် ၁၀၆၊ Shuanghe လမ်း၊ Dianshanhu မြို့၊ ၂၁၅၃၅၅၊ Shanghai, China
အောက်စီဂျင်သည်လေထု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်မဲ့၊ အနံ့ကင်းမဲ့ပြီးအရသာမရှိသလောက်ပါ။ အောက်စီဂျင်သည်လေထက်ပိုလေးပါသည်။ ၎င်းသည်စံအခြေအနေများ (၀.၃ ° C နှင့်လေထုဖိအား ၁၀၁၃၂၅ Pa) အောက်တွင် ၁.၄၂၉ ဂ / L သိပ်သည်းဆရှိသည်။
2020 CMEF AngelBiss ရှန်ဟိုင်း
2020 CMEF Shanghai AngelBiss ပြပွဲမှကြိုဆိုပါသည်။ ငါတို့ဒီမှာ ၁၀.၁၉ ~ ၁၀.၂၂ ။
WHO မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားသည်မှာအောက်စီဂျင်သည် ...
“ COVID-19 ကနေဘဝတွေကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကလိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုအောက်စီဂျင်ပေးတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ခန့်မှန်းချက်အရလက်ရှိတွင်တစ်ပတ်လျှင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁ သန်းနှုန်းဖြင့်ကမ္ဘာသည်ကုဗ ၆၂၀,၀၀၀ ခန့်လိုအပ်သည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
အောင်မြင်မှု AngelBiss ကို 2019 ခုနှစ်တွင်ပြု၏
နည်းပညာအမှတ် ၁ - အထက် ၁၈ ခုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်အသစ် ၁၈ ခုအတွက်အောက်စီဂျင်နှင့်စုတ်ယူခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း - နံပါတ် ၂ - ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးဘက်ထရီ 5L အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုသည်တိဗက် 15000f တွင် ၉၃% No.3-Test 5L အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကိုရရှိသည်။
Obtainin အတွက် AngelBiss အားဂုဏ်ယူပါတယ် ...
မကြာသေးမီကအိန်ဂျယ်ဘစ်စ်သည်တရုတ်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ရုံး၏ခွင့်ပြုချက်ရထားသောမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်နှစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ရရှိခဲ့သောမူပိုင်ခွင့်အသစ်များသည် AngelBiss ၏အားသာချက်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝထင်ဟပ်သည်။
AngelBiss 2020 ထုတ်ကုန်အသစ်များသုတေသနနှင့် ...
AngelBiss သည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင် AngelBiss သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် AngelBiss ၏ပြပွဲအစီအစဉ်
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Medical Oxygen Concentrator နှင့်အိတ်ဆောင်စုတ်ယူခြင်းစက်၏ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူ ANGELBISS သည်လာမည့်ကုန်စည်ပြပွဲများဖြစ်သည့် Ipoh Malaysia Apri, 2020 Milan Italy, 2020, CMEF Shanghai 2020 ...